पार्टी फुटालेर ओलीबाको हैकमवादलाई चुनौति – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । १० कार्तिक २०७८, बुधबार ११:५७ मा प्रकाशित
हैन के ओलीबा हजुरका कुरा अल्लि बुझिनके मैले ! नेकपा एमाले भन्या प्रजातन्त्राँ विश्वास गर्ने पार्टी हो भनेर तपाईँनै भाषण हान्नुहुन्छ । अनि फेरि पार्टीको जिल्ला अधिवेशनाँ चुनाउ नगराएर सर्बसम्मत गराउनु भनेर जिल्ला जिल्लाँ कडा निर्देशन पठाउनुहुन्छ ।
अनि के लोकतन्त्र र प्रजातन्त्राँनी चुनाबाँ जानै नपाईने हुन्छ र ? भन्ने एक गर्ने अनेक हो भने त अब नेकपा एमाले पार्टीको नाम राख्नुपर्ने जस्तो पो भो त ! कि त माधव नेपालका रिसले अब पार्टीभित्र “निर्वाचन “हैन “चयन“ गर्ने नीति आयो र एमाल्याँ । त्यसो त यही निर्वाचन गर्ने र वहस गर्नदिने चलनले पार्टीयाँ गुठैगुठ जन्मेर लास्टाँ माधव नेपालले गुठै लएर पार्टी फुटालेर ओलीबाको हैकमवादलाई चुनौति दिए भनेर नि होला ।
भोली केन्द्रीय महाधिवेशनाँनी कसैलाई टसमस् चल्न नदिन र नेतृत्वाँ कसैले भाँजो नहालुन भनेर नि होला ओलीबाले सर्बसम्मतको निर्देशन जारी गर्या । अर्काेतिर माधव नेपाललाई धोकादेर भीम रावलसहित जो १० जना ओलीबाकै पार्टीयाँ बस्याछन् ।
तिनले आफ्ना कार्यकर्ता न भड्काउन र आउने चुनाबाँ उनरु र उनरका कोही पनि कार्यकर्तालाई निर्बाचित नगरेर तिनरलाई क्लिनस्वीप गर्ना लागिनी ओलीबाले सर्वसम्मतको नीति अख्तियार गर्या होलान् क्यारे । तर यसले जिल्लाँ विवाद रहित नेतृत्व आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी चाइँ भएन ।
तर संगठनभित्र नेतृत्व विरोधीहरुलाई हुल्यो र लिफ्दियो भने तिनैले दुईतिहाईको सरकारलाई नी कसरी थाङ्गनाँ सुताउँदा रैछन् भन्ने कुराको शिकार ओलीबा नै भा हुनाले नी अबको अबधिका लागि ओलीबाले विपक्षी खेमाविहिन पार्टीको कल्पना गरेर चुनाबाँ फेरि दुईतिहाई ल्याउने सपना देख्या होलान् ।
त्यसैले “१० औँ महाधिबेशनको आधार एकलौटी केपीबाको जनमत “ भन्ना लागि नी केपीबाले सर्बसम्मतको संखनाद गरे । हेरम् कार्यकर्ता र नेताले जिल्लाँ कसरी चाल चल्छन् । त्यो त समयले नै बताउला । तर सर्बसम्मतको आदेशचाइँ पक्कै पनि प्रजातान्त्रिक हैन । तर यसमा ओलीबाको व्याख्या के छ त्यो त पछि नै आउला । जयहोस ओलीबाको ।